Madaxweynaha Dalka Mareykanka Donald Trump oo burburiyey Heshiiskii Ganacsiga ee TPP | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Dalka Mareykanka Donald Trump oo burburiyey Heshiiskii Ganacsiga ee TPP
WASHINGTON – Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah u saxiixay Wareegto Madaxweyne oo lagu jebinayo heshiiskii Ganacsiga ee Trans Pacific Partnership(TPP) taasoo ay dowladii Obama ka shaqeynaysay sanadihii lasoo dhaafay.
Heshiiskan Ganacsiga ee TPP ayaa u dhaxeeyey 12 dal oo ah dalalka saaran badweynta Pacific,waxaana heshiiskan uu qorayey in 12-kaas dal ay isu furaan Suuqooda oo lagu qiimeeyey in uu yahay 40% ganacsiga dunnida oo isugu geyn shacabkooda gaarayaan in ka badan 800 minyan oo qof.
Heshiiskan ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeday qaar kamid ah shaqaalaha dalka Mareykanka oo ka cabsi qabay in ganacsiga furan uu sii dhiirigelinayo in shirkado badan ay isaga guuraan Maraykanka oo ay xarumo ka dhiganayaan dalalka ka jaban shaqaalahooda.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa horay u ballan qaaday xilicii uu ololaha ku jiray in uu burburin doono heshiiskan TPP oo uu hada ka dhabeeyey.
Donald Trump ayaa sheegay in Maraykanka hadda wixii ka danbeeya uu heshiisyada ganacsiga ee noocaan ah si toos ah hula geli doono dal alba si gaar ah.
Go’aanka uu gaaray Donald Trump ayaa fursad qaali ah u ah dowladda Shiinaha oo iyaduna waday heshiis kale oo ganacsiga kasoo horjeeda TPP,haas oo ay iyaguna ku mideysan yihiin 16 dal oo doonayey in ay suuqyadooda ganacsiga isu furaan.